Sida loo beddelo goobta laga soo degsado Google Chrome | Androidsis
Sida loo beddelo meesha laga soo degsado Google Chrome
Google Chrome waa biraawsarka ay inta badan dadka isticmaala Android adeegsadaan taleefankooda. Waa wax soo noqnoqda marka aan isticmaalno, aan ka soo dejino feyl biraawsarka, ha ahaato dukumiinti ama sawirro. Wax kasta oo laga soo dajisto waxay aadayaan isla galka soo dejinta. In kasta oo ay macquul tahay in mar uun aannu doonno meel kale.
Nasiib wanaag, waxaan haysannaa waqti kasta suurtagalnimada beddel meesha uu ku jiro galka soo dejinta Google Chrome on Android. Nidaam fudud iyo kaas oo lagu doorto goob taleefanka ah oo aad noogu habboon. Marka waa hubaal inay adiga kaa raaxo badan tahay.
Marka hore waxaan ka fureynaa Google Chrome taleefankeena Android. Markii aan ku dhex jirno biraawsarka, guji astaanta saddexda dhibic ee taagan, oo ku yaal qaybta midig ee sare ee shaashadda. Liiska macnaha guud ayaa markaa furi doona waana inaan galnaa goobaha biraawsarka.
Marka gudaha qaabkeeda, waa inaan u dhaadhacnaa dhamaadka, taas waa halka aan ka helno xulashada soo dejinta. Sidaas awgeed waxaan gujinaynaa inaan galno qaybtaan, si aan u helno xulashooyinka aan ku maareyn karno soo degsashada.
Qaybta ugu horreysa ee aan ka helno hoosta waa meesha laga soo dejisto. Markaan gujino, waxba ma qaban karno. Waa qaybta labaad ee arimahan oo noo saamaxaysa inaan doorano meesha laga soo degsan karo Google Chrome. Ikhtiyaarka la yiraahdo Weydii meesha lagu kaydiyo feylasha, taas oo ay tahay inaanu dhaqaajinno markaa.
Sida loo kiciyo habka akhriska ee Google Chrome
Tan macnaheedu waa markaan wax ka soo degsano Google Chrome taleefankeena Android, waxaa naloo weydiin doonaa meesha aan rabno inaan keydinno feylka. Hab fudud oo lagu beddelo goobta laga soo degsado qalabka, si ay noogu fududaato inaan u isticmaalno kiiskeenna.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida loo beddelo meesha laga soo degsado Google Chrome
Sidee loo aamusiyaa codka khariidadaha Google inta lagu jiro wicitaanada